DIIWAANKA CUSUB: Christina Koch ayaa 328 maalmood ku wareegeysa hawada sare.
Inicio/Ciencia/DIIWAAN CUSUB: 328 MAALIYADII FULINTA EE BANAADKA.
DIIWAAN CUSUB: 328 MAALIYADII FULINTA EE BANAADKA.
0 3.314 2 daqiiqo akhri
Christina Koch ayaa ku soo laabatay Dunida ka dib markii ay jabisay rikoorka waqtiga ugu dheer ee ay ku qaadatay hawada sare
Cirbixiyeenka Mareykanka Christina Koch ku soo noqday meeraha Dunida bishii Febraayo 6, ka dib markii uu 328 maalmood oo xiriir ah ku qaatay booska, isagoo soo afjaray hawlgal bilawday Maarso 14, 2019.
Guriga Imaanshaha Christina Koch
Ma hubo cidda ka xiisaha badnayd. Farxad ayay igu xasuusataa sanad kadib! pic.twitter.com/sScVXHMHJn
- Christina H Koch (@Astro_Christina) February 13, 2020
Cirbixiyeennada Koch waxay noqotay haweeneyda ku haray bannaanka jawiga Dunida intii ugu dheerayd muddadii ay socotey hal hawlgal, iyadoo ku dhowaad hal sano ku qaadatey saldhigga caalamiga ah ee hawada sare (ISS), iyadoo ka sarreysa Peggy Whitson, oo lahayd dhammaystiray 289 maalmood. Tirooyinkan ayaa Koch ka dhigaya qofkii shanaad iyo kii labaad ee Mareykan ah ee safarka kuwada jira isla goobta ugu dheer.
Koch wuxuu ku yimid boos kaabsalkii Soyuz, isaga iyo asxaabtiisii ​​cosmonaut-ka Ruushka A. Skvortsov iyo cirbixiyeenka reer Talyaani L. Parmitano, waxay ka degeen dabaqyada Kazakhstan, ee Bartamaha Aasiya, saacadu markay ahayd 09 GMT, ka dib duulimaad 12 iyo saacadood iyo badh ah. . Intii lagu guda jiray howlgalka, Koch wuxuu sameeyay dhowr tijaabo, oo ay kujirto barashada saameynta microgravity ee cagaarka iniin khardal Mizuna, gubashada, bioprinting, iyo cudurka kalyaha. Intaa waxaa dheer, Koch lafteedu waxay ahayd mawduuc cilmi baaris ah si loo go'aamiyo saameynta muddada-dheer ee duulimaadka hawada ee jirka bini'aadamka.
Christina ayaa jabisay rikoor kale
Ma ahan rikoodhkii ugu horreeyay ee Koch jabiyo, tan iyo sanadkii hore bishii Oktoobar waxay la sameeyeen lammaanihiisa Jessica Meir marinkii ugu horreeyay ee 1 koox oo keliya loogu talagalay haweenka, taasina waxay qaadatay in ka badan 7 saacadood. Hadda Christina Koch ku guuleysatay inay ahaato 328 maalmood oo hawada sare ah
Sidoo kale, Christina Koch jirkeeda waxaa baran doona sayniska si loo baaro cawaaqibka hawlgallada muddada-dheer ee cosmo-jirka ee haweenka. Runtii, Koch wuxuu 30 maalmood oo keliya ku qaatay meel ka yar Scott Kelly, cirbixiyeenka reer Mareykan ee waqtiga ugu badan ku qaatay hal hawl isla markaana iska kaashaday daraasadda caanka ah ee mataanaha ah si loo baaro saameynta booska ku leeyahay anatomy-ka aadanaha.
Waad ku jiri kartaa booska adigoo ugu mahadcelinaya xaqiiqda dhabta ah.
cirbixiyeen Mareykan ah Kaabsol Soyuz Christina Koch Scott Kelly duulista hawada sare
XENOBOTS: waa robotyada adduunka ugu horreeya ee iskiis isu bogsada
Maxaad u isticmaashaa Antivirus?
Waxay raadinayaan inay u oggolaadaan kaniin dilaa ah dadka waaweyn ee ka weyn 70 jir, kuna daalay nolosha.
Khariidadaha Google iyo Khariidadda Dabagalka Kiiska Coronavirus (2020)
Sigaar cabiddu waxay horseedi kartaa cudurka macaanka uurka
Meeraha Jupiter kuma wareegto qorraxdayada
Elon Musk, oo ah agaasimaha shirkadda SpaceX, ayaa qeexaya shuruudaha ugu yar ee la doonayo in lagu gumeysto Mars
Saynisyahano uu hogaaminayo Dr. Yuman Fong, ayaa helay virus dila dhamaan noocyada kansarka ee la yaqaan